ခြောက်သွေ့သောအပူ (Dry-Heat Method) ဖြင့် ချက်ပြုတ်နည်းများ | Food Magazine Myanmar
ခြောက်သွေ့သောအပူ (Dry-Heat Method) ဖြင့် ချက်ပြုတ်နည်းများ
မြန်မာ စားဖိုမှူးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့အသုံးချပညာရပ်များကို “Myanmar Chefs Development Centre” ရဲ့ “Chefs Education Page” မှာ ပြီးခဲ့တဲ့လက “စိုစွတ်သောအပူ (Moist – Heat Method) ဖြင့် ချက်ပြုတ်နည်းများ” ကို ဖော်ပြပေးခဲ့ပြီး ယခုလမှာတော့ စားဖိုမှူးများအတွက် လုပ်ငန်းခွင်မှာ မဖြစ်မနေလိုအပ်ပြီး လေ့လာသင်ယူတတ်မြောက်ထားရမည့် ချက်ပြုတ်နည်း အခြေခံများနှင့် သက်ဆိုင်သော အချက်အလက်များမှ “ခြောက်သွေ့သောအပူ (Dry-Heat Method) ဖြင့် ချက်ပြုတ် နည်းများ္လ ကို ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်။ အောက်မှာ အသေးစိတ် ဆက်လက် လေ့လာကြည့်ကြရအောင် . . . ။
(ခ) ခြောက်သွေ့သော အပူ (Dry-Heat Method) ဖြင့် ချက်ပြုတ်နည်းများ။
(၈) ဆီ အနည်းငယ်ဖြင့် ဒယ်အိုး (သို့) ဒယ်ပြားတွင် အတုံးငယ်များဖြင့် မြှင့်မြှောက်ကြော်ခြင်း။
Saute (or) Stir – Fried (100˚C and above)
အစားအစာများကို ဒယ်အိုး၊ ဒယ်ပြားတွင် ဆီအနည်းငယ်ဖြင့် ကြော်လှော် ချက်ပြုတ်ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ ဒီနည်း နဲ့ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်မယ်ဆိုရင်တော့ အဓိကအားဖြင့် အသား၊ ငါး၊ အသီးအရွက်များအားလုံးကို အတုံးငယ်လေးများ (သို့) ပါးပါး လှီးဖြတ် ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ဒယ်အိုးထဲမှာ မြှင့်မြှောက်ပြီး ကြော်လှော်တာဖြစ်သည့်အတွက် အရွယ်အစား ကြီးမားတဲ့ အသား ၊ ငါး၊ အသီးအရွက်များအား ပြင်ဆင်ရန် မသင့်တော်ပါ။ ဒီချက်ပြုတ်နည်းမှာ အထူးသတိပြုရန် အချက် ၄ ချက်ရှိပါတယ်။ အဲဒီအချက်တွေကတော့…
(၁) ဒယ်အိုး၊ ဒယ်ပြားများကို ဦးစွာအပူပေးပြီးမှ ဆီအနည်းငယ်မျှဖြင့် အသား၊ ငါး၊ အသီး အရွက်များကို ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်ပေးရပါမယ်။ ဒယ်အိုးမပူလျှင် အစားအစာများမှ အရည်ထွက်လာတတ်ပြီး အရည်အနည်းငယ်ဖြင့် ချက်ပြုတ်နည်း (Simmering) ကဲ့သို့ဖြစ်သွားပါက ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နည်း မှားယွင်းသွား တတ်ပါတယ်။
(၂) ဒယ်အိုး ၊ ဒယ်ပြားထဲတွင် အစားအစာများ မို့မောက်ပြည့်လျှံနေအောင် အလွန်အမင်း ထည့်ချက်ခြင်းမှလည်း ရှောင်ကြဉ်ရပါမယ်။ အကယ်၍ ပမာဏများစွာ ထည့်ကြော်မိပါက အပူချိန်မလုံလောက်သဖြင့် အစားအစာများမှ အရည်များထွက်တတ်ပြီး အရည်အနည်းငယ်ဖြင့် ချက်ပြုတ်နည်း (Simmering) ကဲ့သို့ ကူးပြောင်းသွားနိုင် သဖြင့် ချက်ပြုတ်နည်း မှားယွင်းသွားနိုင်ပါတယ်။
(၃) အစားအစာများကို ဆီ အနည်းငယ်ဖြင့် မြှင့်မြှောက် ကြော်လှော်မည်ဆိုပါက ဂျုံမှုန့်၊ ဆန်မှုန့် ၊ ကော်မှုန့်တစ်မျိုးမျိုးဖြင့် ကပ်ပြီးမှ ကြော်လှော်လျှင် ပို၍ကောင်းမွန်ပါတယ်။ အစားအစာများ အရောင်လှပညီညွတ်မှုနှင့် အိုးကပ်ခြင်း၊ တူးခြင်းတို့မှ ကာကွယ်နိုင်ပါတယ်။
(၄) အစားအစာများကို ဆီအနည်းငယ်မျှဖြင့် ကြော်လှော်ချက်ပြုတ်ခြင်းကြောင့် ဒယ်အိုးတွင် ကပ်ကျန်နေတတ်သော အညိုရောင်သန်းပြီး ရနံ့ကောင်းသည့် အချိုဓာတ်များကို ဝိုင်၊ ပြုတ်ရည်အမျိုးမျိုးတို့ဖြင့် (Deglazing) ဆော့စ်အနှစ် ပြင်ဆင်ရာတွင် ပြန်လည် အသုံးပြုနိုင်ပြီး ချက်ပြုတ်ကြော်လှော်ထားသော အစားအစာများနှင့် တွဲဖက် တည်ခင်းနိုင်ပါတယ်။
( ၉ ) ဆီအနည်းငယ် (သို့) ဆီတွင် အစားအစာတစ်ဝက်ခန့် မြှုပ်၍ကြော်ခြင်း။
(Pan – Fried) (74˚C to 100˚C)
အသား၊ ငါး၊ ဟင်းသီးဟင်းရွက်များကို ဆီတစ်ဝက်ခန့် မြှုပ်၍ ကြော်ချက်ခြင်းနည်းမှာ ချက်ပြုတ်လိုသော အစားအစာ အနည်းအများပေါ်မူတည်ပြီး ဆီအနည်းအများကိုလည်း ထိန်းညှိပေးဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဆီအနည်းငယ်မြှုပ်၍ ကြော်ချက်ခြင်းနည်း (Pan-Fried) လိုက်နာရန် အချက် ၄ ချက်ခန့် ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) အရွယ်အစား ကြီးမားသော အသား၊ ငါး၊ အသီးအနှံများကို ကြော်ချက်ရာတွင် မီးအနေတော် (Medium Heat) ဖြင့်သော်လည်းကောင်း ၊ မီးပျော့ပျော့ (Low Heat) ဖြင့်သော်လည်ကောင်း အချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင် ကြော်ချက်ပေးရန် လိုပါတယ်။
(၂) ကြက်ဥ၊ ပန်ကိတ်ကဲ့သို့ အစားအစာများကို ဆီအနည်းငယ်ဖြင့်သာ ကြော်ချက်ရန် လိုအပ်ပြီး အသားပြား၊ ငါးအသားလွှာ၊ အသားတုံးကြီးများကို ကြော်ချက်ရန်အတွက် ဒယ်အိုးထဲတွင် ဆီအနည်းဆုံး ၁ လက်မခန့် မြုပ်အောင်ထည့်ပြီးမှ ကြော်ချက်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
(၃) အသား၊ ငါး၊ အသီးအနှံများကို ကြော်ချက်ရာတွင် အကျက်ညီမျှစေရန် အနည်းဆုံး တစ်ကြိမ် တစ်ဖက်သို့ လှည့်ပေးခြင်း၊ လှန်ပေးခြင်းများ လုပ်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
(၄) အသား၊ ငါးများကို ဆီအနည်းငယ်မြှုပ်၍ ကြော်ချက်ရာမှာ အသားနှင့် ငါးများ အရွယ်အစားကြီးမားပါက ဆီထဲမှာ အရောင်ညိုလာစေရန် တစ်ဖက်တစ်ချက်စီမျှ ကြော်ပေးပြီး အသား ၊ ငါးများ၏ အတွင်းပိုင်းကျက်စေရန် အာဗင် (Oven) တွင် အဆုံးသတ်ရန် အထူးလိုအပ်ပါတယ်။ အထက်ပါအတိုင်း မပြင်ဆင်ခဲ့ပါက အသား၊ ငါးများ မာကျောပြီး အရသာ၊ ရနံ့များ ဆုံးရှုံးတတ်ပါတယ်။
(၁၀) အစားအစာများကို သတ္တုအပူ၊ မီးသွေးမီးအပူ၊ ထင်းမီးအပူတို့ဖြင့် ပတ်လည် လှည့်ပတ်၍ ကင်ခြင်း။
(Pan–Broiling/Griddling/Bar-be-cueing) (74˚C to 250˚C and above)
အစားအစာများကို မီးသွေး၊ ထင်း၊ လျှပ်စစ်၊ ဓာတ်ငွေ့တို့ကို အပူအဖြစ်အသုံးပြုပြီး သတ္တုပြားပေါ်တွင် ကင်ချက်ခြင်းနည်းဖြစ်ပါတယ်။ သတ္တုပြားပေါ်တွင် ကင်ချက်ခြင်းကို (Griddling or Pan-Broiling) လို့ ခေါ်လေ့ရှိပါတယ်။ အစားအစာများကို သတ္တုအပူ၊ မီးသွေးမီးအပူ၊ ထင်းမီးအပူတို့ဖြင့် ပတ်လည်လှည့်ပတ်၍ ကင်ခြင်းနည်းတွင် လိုက်နာဆောင်ရွက်ရန် အချက် ၃ ချက်ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
( ၁ ) အစားအစာများကို ကင်ချက်ခြင်း ပြုရာတွင် အဖုံးအုပ်ခြင်း လုံးဝ မပြုလုပ်သင့်ပါ။ အဖုံးအုပ်လိုက်ပါက ရေနွေးငွေ့ကို ဖြစ်ပေါ်စေသဖြင့် ဟင်းချက်နည်း ပြောင်းလဲသွားတတ်ပါတယ်။ သတ္တုပြားပေါ်မှ အပူကို အစားအစာများပေါ် မူတည်ပြီး အပူတိုးခြင်း၊ အပူလျှော့ချခြင်းများလည်း ပြုလုပ်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
( ၂ ) သတ္တုပြားပေါ်မှာ အစားအစာများ ကင်ချက်သည့်အခါ ဆီ အနည်းငယ် (သို့) လုံးဝ မထည့်ဘဲ ကင်ချက်နိုင်ပါတယ်။ သတ္တုပြားတွင် မကပ် မတူးစေရန်အတွက် လိုအပ်ပါက ဆီအနည်းငယ် ဖျန်းပေးသင့်ပါတယ်။ အပူချိန်အနေနှင့်အနိမ့်ဆုံး အပူချိန် ၃၅၀ံဖာရင်ဟိုက် (သို့ ) ၁၇၇ံစင်တီဂရိတ်ခန့်ထားရှိသင့်ပါတယ်။သတ္တုပြားပေါ်မှာ လိုင်းများပါရှိသည့် (Grooved Griddle) များဖြင့် ကင်ချက်ပါက ဘာဘီကျူ (Barbecue) ကင်သကဲ့သို့ မီးခိုးရနံ့ (Smoke Flavored) မရရှိနိုင်ပေမည့် ဆီအနည်းငယ်ဖျန်း၍ ကင်ချက်ပါက ဆီချက်ရနံ့ရရှိနိုင်ပါတယ်။
( ၃ ) အိုးကင်းပူကပ်ချက်ခြင်း (Pan-Broiling) နည်းကတော့ မီးဖိုပေါ်မှာ သတ္ထုအိုးကို ဆီအနည်းငယ်ဖြင့် အပူပေးပြီး ပြင်ဆင်သည့် နည်းလမ်းပါ။ Griddle ကဲ့သို့ သတ္တု ပြားဖြင့်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် အလားတူ ဖြစ်ပါတယ်။ သတိပြုရမည့်အချက်ကတော့ ကင်ချက်နေချိန်တွင် ဒယ်အိုးကို လုံးဝအဖုံးမအုပ်သင့်ပါ။ အကယ်၍ အဖုံးအုပ်ခဲ့ပါက ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နည်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်သကဲ့သို့ မည်သည့်အရည်တစ်မျိုးမျိုးကိုမျှ ထည့်ဖျန်းပြီး မကင်ချက်သင့်ပါ။
(၁၁) အစားအစာများကို ဆီတွင် လုံးဝနှစ်မြှုပ်၍ ကြော်ခြင်း။
(Deep – Fried ) (175˚C to 190˚- 195˚C)
အစားအစာများကို ဆီပူတွင် လုံးဝနှစ်မြှုပ်၍ကြော်ခြင်း နည်းဖြစ်ပါတယ်။ ဆီမှာ အပြည့်အဝ နှစ်မြှုပ်၍ကြော်ခြင်းကြောင့် ရရှိနိုင်မည့် အချက်များကတော့ အစားအစာများတွင် ဆီစုပ်ယူမှုနည်းခြင်း၊ အစားအစာများတွင်ရှိသော အစိုဓာတ် မဆုံးရှုံးစေခြင်း၊ အရောင်ညိုပြီး အဆင်းလှခြင်း၊ြွကပ်ရွပြီး အရသာထူးခြင်း၊ အစားအစာများတွင်ရှိသော ရနံ့များ မပျောက်ပျက်ဘဲ ရနံ့မွှေးပျံ့စေခြင်းများ ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာများကို ဆ်ီမြှုပ်ကြော်ချက်ရာတွင် လိုက်နာရမည့် အချက် ၈ ချက်ရှိပါတယ်။ အောက်မှာ ဆက်လက်ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
( ၁ ) မှန်ကန်သော ဆီ အပူတွင် ကြော်ချက်ရန်လိုအပ်ပါတယ်။ အများအားဖြင့် အပူချိန် ၃၅၀ံမှ ၃၇၅ံဖာရင်ဟိုက် (သို့) ၁၇၅ံမှ ၁၉၀ံစင်တီဂရိတ်ခန့်ဖြင့် ကြော်ချက်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အစားအစာများကို အပူချိန်ပျော့ပျော့တွင် ကြော်ချက်ပါက ဆီ အများအပြား စုပ်ယူနိုင်ပြီး စားသုံးရန် မသင့်တော်ပါ။
(၂) အစားအစာများကို အလွန်အကျူး ပြည့်လျှံစွာထည့်၍ ဆ်ီမြှုပ် မကြော်သင့်ပါ။ အကယ်၍ ပမာဏများစွာကို တစ်ချိန်တည်းမှာကြော်ချက်ပါက အပူချိန် လျှော့ကျ သွား နိုင်ပြီး ဆီစုပ်ယူမှု များပြားသွားနိုင်ပါတယ်။
(၃) အရည်အသွေး ကောင်းမွန်ပြီး အပူချိန်နှင့် အကြော်ခံနိုင်သော ဆီသန့်သန့်ဖြင့် အသုံးပြုကြော်ချက်သင့်ပါတယ်။ ဆီကို အစဉ်အမြဲ သန့်စင်စွာ ထိန်းသိမ်းထားသင့်ပါတယ်။ ဆီ အရောင်နှင့် ရနံ့ကို အမြဲသတိပြုသင့်ပါတယ်။
(၄) အကြော်ခံ ဆီကို ရေရှည်အသုံးပြုနိုင်စေရန် နေ့စဉ် ဆီသန့်၁၅ % မှ ၂၀ % အထိ ထပ်မံဖြည့်တင်းပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
(၅) ဆီ အဟောင်းများကို ပုံမှန်လဲလှယ်ပေးရန် လိုအပ်ပါတယ်။
(၆) အစားအစာများကို အနံ့ အရသာပိုမိုကောင်းမွန်စေရန် ရနံ့ ပြင်းသော အစားအစာများ နှင့် ရနံ့ပျော့သောအစားအစာများကို ဆီတစ်အိုးထဲတွင် ထည့်၍မကြော်ချက်သင့်ပါ။
(၇) အစားအစာများကို တည်ခင်းရန်အချိန်နှင့် နီးကပ်စွာ ကြော်ချက်ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ အချိန်စောစွာ ကြိုတင်ကြော်ချက်ထားပါက အစားအစာကြွပ်ရွမှု လျော့နည်းသွားနိုင်ပါတယ်။
( ၈ ) အစားအစာများကို မကြော်ချက်မီ ရေလုံးဝ ကပ်ပေမှုမရှိစေရန် ပြင်ဆင်ရပါမယ်။ အကြော်ဖို (သို့) အကြော်အိုးကို အသုံးမပြုပါက လုံးဝမီးပိတ်ထား၍သော် လည်းကောင်း၊ အပူချိန်ကို ၂၀ဝံမှ ၂၅၀ံဖာရင်ဟိုက် (သို့) ၉၅ံမှ ၁၂၀ံစင်တီဂရိတ် သို့ လျှော့ချထားသင့်ပါတယ်။ အမှုန့်နှင့် အနှစ်များကို သေချာစွာစစ်ခါချပြီးမှ ဆီထဲသို့ ထည့်ကြော်သင့်ပါတယ်။ အစားအစာများမှ ကြွင်းကျန်နေခဲ့သော အမှုန်အမွှားများ ကို ပုံမှန်စစ်ထုတ်ဖယ်ယူ ဖယ်ရှားပေးရပါမယ်။
(၁၂) အစားအစာများကို လေအပူဖြင့် ကင်ပေါင်းခြင်း။
(Roasting) (160˚C to 250˚C and above)
အသား ၊ ငါး နှင့် အသီးအနှံများကို လေအပူဖြင့် သော်လည်းကောင်း ၊ မီးသွေးမီး၊ ထင်းမီး ၊ လျှပ်စစ်မီး ၊ ဓာတ်ငွေ့မီးများကိုအသုံးပြု၍ လှည့်ပတ်ပေးပြီး ကျက်စေသည့်နည်း ဖြစ်ပါတယ်။ အစားအစာများကို တံပူထိုး၍သော်လည်းကောင်း၊ လှည့်၍ ကင်ပေးခြင်း မျိုးလည်းဖြစ်ပါတယ်။ ကင်ပေါင်းခြင်းနည်းအတွက် လိုက်နာဆောင်ရွက်သင့်သည့်အချက် ၄ ချက်တို့ကို အောက်မှာဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။
(၁) ကင်ပေါင်းခြင်းနည်းဖြင့် အသုံးပြုပြင်ဆင်ပါက အစားအစာများကို လုံးဝ အဖုံးအုပ်ခြင်း မပြုလုပ်ရပါ။ အကယ်၍ အဖုံးအုပ်မိပါက ရေနွေးငွေ့ကို ဖြစ်ပေါ်စေ၍ ခြောက်သွေ့သော အပူမှ စိုစွတ်သောအပူသို့ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။
(၂) အစားအစာများကို စင်ပေါ်မှာ တင်၍ ကင်ပေါင်းရပါမယ်။ နံရိုးကဲ့သို့ အစားအစာ များတွင် မူလပါရှိပြီးဖြစ်သည့် အရိုးဖြင့် ထောက်မပေးထားနိုင်ပေမယ့် သာမန် အားဖြင့် အသား၊ ငါး ၊ အသီးအနှံများကိုမူ စင်ပေါ်တွင်တင်၍ ကင်ပေါင်းရပါမယ်။အကယ်၍ ဗန်း (သို့) အိုးထဲတွင် စင်မခုမခံဘဲ ကင်ပေါင်းပါက အစားအစာတွင် မူလကပါဝင်ပြီးသော အရည်များနှင့် ထိတွေ့ချက်ပြုတ်မိမည် ဖြစ်သည့်အတွက် ချက်ပြုတ်နည်း ပြောင်းလဲသွားနိုင်ပါတယ်။
(၃) လေအပူဖြင့် ကင်ပေါင်းခြင်းနည်း၌ ပေါင်းဖိုတွင် အပူမညီမျှမှု ရှိနိုင်သဖြင့် ချက်ပြုတ် ပြင်ဆင်သည့် စားဖိုမှူးက ညီမျှအောင် လှည့်ပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။ ပေါင်းဖို ၏ အတွင်းပိုင်းသည် အပြင်ပိုင်းထက် ပိုမိုအပူကဲသည့်အတွက် အတွင်းဘက်နှင့် တံခါးဘက်အခြမ်းကို လှည့်လည် ကင်ပေါင်းပေးရန်လိုအပ်ပါတယ်။
(၄) ကင်ပေါင်းခြင်းကို ဘာဘီကျူ (Barbecue) ကဲ့သို့လည်း ပြင်ဆင်နိုင်ပါတယ်။ အစားအစာများကို ရိုးရာအတိုင်း မီးဖုတ်ကင်ပေါင်းခြင်းကို ထင်းမီး ( သို့ ) မီးသွေးမီးတို့ဖြင့် ကင်ပေါင်းကြပါတယ်။ ဒီဘက်ခေတ်မှာတော့ အများအားဖြင့် မီးခိုးရနံ့ ထည့်သွင်းကင်ပေါင်းနိုင်သော ပေါင်းဖို (Smoke Oven) ကဲ့သို့ ကိရိယာများဖြင့် ပြင်ဆင်နိုင်ကြပါတယ်။
(၁၃) အစားအစာများကို လေအပူဖြင့် ဖုတ်ခြင်း။
(Baking) (160˚C to 350˚C and above)
အစားအစာများထဲမှ အများအားဖြင့် မုန်ဖုတ်ခြင်းများ ၊ အသီးအရွက်ဖုတ်ခြင်းများတွင် အသုံးပြုများပါတယ်။ ပေါင်မုန့် ၊ ကိတ်မုန့်နှင့် မုန့်ဖုတ်ခြင်းများတွင် (Baking) နည်းဖြင့်သာ အသုံးပြုကြပါတယ်။ ကင်ပေါင်းခြင်း (Roasting) နှင့် မုန့်ဖုတ်ခြင်း (Baking) နည်းများသည် အခေါ်အဝေါ်သာကွဲပြားပြီး အခြေခံအားဖြင့်တူညီသော နည်းများဖြစ်ပါတယ်။
(၁၄) အစားအစာများကို ရောင်ခြည်ဖြာထွက်စေခြင်းဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်း။
(Microwave Cooking) (74˚C to 100˚C and above)
အစားအစာများကို လျှပ်စစ်ရောင်ခြည်လှိုင်းဖြင့် ချက်ပြုတ်ခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အစားအစာများကို အပူနွှေးခြင်း၊ အေးခဲအသား ၊ ငါးနှင့် အသီးအရွက်များကို ဖြေဖျော့ ပျော့ပျောင်းစေခြင်းများတွင်လည်း အသုံးပြုကြသလို အစားအစာများကို အချိန်တိုအတွင်း ပြင်ဆင်နိုင်ခြင်း ၊ ကျန်းမာရေးနှင့် ညီညွတ်သော အထူးသဖြင့် ဆီ လုံးဝ အသုံးပြုရန်မလိုအပ်သော နည်းဖြစ်ပါတယ်။
အထက်မှာဖော်ပြပေးခဲ့တဲ့ ပြင်ဆင်ချက်ပြုတ်နည်းတွေကတော့ ခြောက်သွေ့သော အပူစနစ်ဖြင့် အစားအစာများကို ချက်ပြုတ်နည်းများပဲ ဖြစ်ပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အတွင်း အစားအစာများ ချက်ပြုတ်ပြင်ဆင်ခြင်းများနှင့် သက်ဆိုင်သော အခြေခံ လိုက်နာဆောင်ရွက်ရမည့် အချက်များဖြစ်ပါတယ်။ လာမယ့် လတွေမှာလည်း လုပ်ငန်းခွင် လက်တွေ့အသုံးချ အခြေခံအချက်အလက်များထဲမှ ထပ်မံသိရှိလေ့လာနိုင်ရန် “Myanmar Chefs Development Centre, MCDC” ရဲ့ “Chef Education Page” မှာ ဆက်လက် ဖော်ပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့ ဖတ်ရှုလေ့လာ မှတ်သားလိုက်နာဆောင်ရွက်ကြပါလို့ တိုက်တွန်းရင်း … Meet you at MCDC’’ Yangon !!! BeaChef by yourself !!!